Maxay Yihiin Nofollow, Dofollow, UGC, ama Iskuxirayaasha La Isboonsar gareeyay?
Maalin kasta sanduuqgeygu wuxuu ku qulqulaa shirkado SEO ah oo been abuur ah kuwaas oo ka baryaya inay xiriiriyaal ka dhigaan waxyaabaha ku jira. Waa codsiyo aan dhammaad lahayn oo runtii iga careysiiya. Waa tan sida emaylku badanaa u socdo goes
Gacaliye Martech Zone,
Waxaan ogaaday inaad ku qortay maqaalkan cajiibka ah [keyword]. Waxaan sidoo kale ka qornay maqaal faahfaahsan. Waxaan u maleynayaa inay wax weyn ku kordhin doonto maqaalkaaga. Fadlan ii sheeg haddii aad awoodo inaad tixraac ku sameyso maqaalkeena oo leh xiriiriye.
Marka hore, had iyo jeer waxay qoraan maqaalka sidii iyagoo isku dayaya inay i caawiyaan oo ay hagaajiyaan nuxurkeyga markaan ogaado dhab ahaan waxa ay isku dayayaan inay sameeyaan do backlink. Inkasta oo makiinadaha raadinta ay si sax ah u muujinayaan boggagaaga iyada oo ku saleysan waxa ku jira, bogaggaas waxay ku kala saari doonaan tirada la xiriira, boggag tayo sare leh oo ku xira iyaga.
Waa maxay Xiriiriyaha Nofollow? Ma raacdaa Link?
A Xiriiriyaha Nofollow waxaa loo adeegsadaa barta dhexdeeda 'HTML tag' si ay ugu sheegto mashiinka raadinta inay iska indhatiraan iskuxirka markay tahay gudbinta awood kasta. Tani waa waxa ay umuuqato HTML-ka ceyriinka ah:
Hadda, sida gurguurashada mashiinka raadinta gurguurashadayda, wuxuu tusaalaynayaa waxyaabaha aan ka kooban yahay, wuxuuna go'aamiyaa backlinks-ka si ay awood ugu siiso ilaha sources way iska indhatiraysaa nofollow xiriiriyeyaasha. Si kastaba ha noqotee, haddii aan ku xiriiri lahaa bogga loo socdo ee ku dhex jira waxyaabaha aan qori lahaa, astaamaha barroosinkaas malahan astaamaha nofollow. Kuwaas ayaa loo yaqaan Xiriirinta Dofollow. Sida caadiga ah, xiriiriye kastaa wuxuu dhaafayaa awoodda darajo illaa aan lagu darin astaamaha rel, iyo tayada xiriiriyaha ayaa la go'aamiyaa.
Si xiiso leh oo ku filan, xiriiriyeyaasha nofollow ayaa wali lagu muujiyaa Google Search Console. Waa tan sababta:
Marka Xiriirinta Dofollow Meel kasta ayaa ka caawiya Darajadayda?
Markii la ogaaday awoodda lagu maareyn karo qiimeynta iyada oo loo marayo dib-u-xiriirinta, bilyan-doolar warshad ayaa billowday habeennimo si looga caawiyo macaamiisha inay kor ugu qaadaan safafka. Shirkadaha SEO si otomaatig ah oo loo dhisay isku xidhka beeraha waxayna ku kacday gaaska si ay u maareyso matoorada raadinta. Dabcan, Google waxay ogaatay… wax walbana way burbureen.
Google waxay hagaajisay algorithms-keeda si ay ula socoto darajada goobaha isku urursaday backlinks la xiriira, domains awood leh. Marka, maya… ku darida xiriiriyeyaasha meel uun kuuma caawin doonaan. Ku kasbashada backlinks bogagga aadka u khuseeya ee awoodda leh ayaa kaa caawin doona. Wax yar oo iska soo horjeedda ah, isku-dirista isku-dirku waxay u egtahay inay dhaawici doonto awooddaada darajo maadaama sirdoonka Google ay sidoo kale kala sooci karto wax is daba marinta oo ay kugu ciqaabi karto.
Qoraalka Xiriirku Ma Muhiim Yahay?
Markay dadku maqaallo ii soo gudbiyaan, inta badan waxaan arkaa iyagoo adeegsanaya eray-bixinno xad-dhaaf ah oo ku dhex jira qoraalka qormooyinkooda. Runtii ma aaminsani in algorithms-ka Google ay yihiin kuwo si fudud u fudud oo qoraalka ku xira xiriirkaaga ay yihiin ereyada kaliya ee muhiimka ah. Layaabi maayo haddii Google falanqeeyo waxyaabaha macnaha guud leh ee ku xeeran xiriirka. Uma maleynayo inaad u baahan tahay inaad si muuqata uga muuqato xiriiriyeyaashaada. Markasta oo aan shaki galo, waxaan kula taliyaa macaamiishayda inay sameeyaan waxa u fiican akhristaha. Waa sababta aan u isticmaalo badhamada markaan runtii rabo inaan dadku arko oo dhagsiiyo xiriiriye dibedda ka baxa.
Ha iloobin in calaamadda barroosku ay labadaba bixiso text iyo sidoo kale a horyaalka xiriirkaaga. Cinwaannada waa astaamo marin u helid si ay uga caawiyaan akhristayaasha shaashadu inay sharraxaan iskuxiraha isticmaaleyaashooda. Si kastaba ha noqotee, daalacashada badankood iyaga ayaa sidoo kale soo bandhiga. SEO gurus kuma raacsani in qoritaanka cinwaanka cinwaanka ay ka caawin karto darajadaada ereyada muhiimka ah ee la isticmaalay. Si kastaba ha noqotee, waxaan u maleynayaa inay tahay dhaqan weyn oo waxay ku dareysaa wax yar oo pizazz ah markii qof uu ka xanaajiyo isku xirnaantaada oo caarad la soo bandhigo.
Ka waran Xidhiidhada La Isboonsar gareeyay?
Waa tan e-mayl kale oo maalin kasta la helo. Runtii waan ka jawaabayaa kuwan… oo aan waydiinayaa qofka haddii ay runti iga codsanayaan in aan sumcaddayda khatar geliyo, oo ay dawladda ganaaxdo, oo aan ka baaro matoorada raadinta. Waa codsi lagu qoslo. Marka, mararka qaarkood waan jawaab celiyaa oo waxaan u sheegaa inaan ku farxi lahaa taas… waxay ku kici doontaa iyaga $ 18,942,324.13 halkii backlink. Weli waxaan sugayaa qof si aan lacagta ugu xiro.
Waxaan ogaaday inaad ku qortay maqaalkan cajiibka ah [keyword]. Waxaan jeclaan lahayn inaan lacag ku siino inaad dhigto xiriiriye maqaalkaaga ah si aad ugu muujiso maqaalkeenna [halkan]. Immisa ayey ku kacaysaa in lagu bixiyo iskuxirka dofollow?
Tani runti waa wax laga xumaado maxaa yeelay waxay macno ahaan iga codsaneysaa inaan sameeyo waxyaabo yar:
Jebinta Shuruudaha Adeegga ee Google - waxay i weydiinayaan inaan qariyo xiriirkayga lacag bixinta ee guurguurayaasha Google:
Xiriiro kasta oo loogu talagalay in lagu maareeyo PageRank ama darajooyinka bogga ee natiijooyinka raadinta Google waxaa loo tixgelin karaa qayb ka mid ah nidaamka isku xirka iyo ku xadgudubka Google Tilmaamaha Macmiilka.
Qorshayaasha Xiriirka Google
Ku Xadgudubka Xeerarka Federaalka - waxay i weydiinayaan inaan ku xad gudbo tilmaamaha FTC ee ku saabsan oggolaanshaha.
Haddii uu jiro xiriir u dhexeeya ansixiyaha iyo suuq-geynta oo macaamiisha aysan fileynin oo ay saameyn ku yeelaneyso sida macaamiisha u qiimeynayaan ansaxinta, xiriirkaas waa in la shaaciyo.
Hagaha Ansixinta FTC
Ku xadgudubka Aaminaada Akhristayaasheyda - waxay i weydiinayaan inaan been u sheego dhageystayaasheyda! Dhageystayaal aan la shaqeynayay 15 sano si aan u dhiso kuwa soo socda oo aan kalsooni ku helo. Waa wax aan laga tashan karin. Sidoo kale waa dhab ahaan sababta aad u arki doontid inaan shaaca ka qaado xiriir kasta oo ku saabsan maqaal kasta - hadey tahay isku xirnaansho xiriiriye ama saaxiib ganacsi.
Google waxay weydiin jirtay in xiriiriyeyaasha la kafaala qaaday ay isticmaalaan nofollow sifo. Si kastaba ha noqotee, iyagu hadda waxbay ka beddeleen taas oo waxay leeyihiin sifo cusub oo ay kafaala qaadeen xiriiryada lacag bixinta:
Ku calaamadee xiriiriyeyaal ah xayeysiis ama meeleyn lacag bixin ah (oo badanaa loo yaqaan xiriiriyeyaal la bixiyo) oo leh qiimaha la kafaala qaaday.
Google, Uqalmid Xiriirinta Dibedda
Xiriirimahaas waxaa loo qaabeeyey sida soo socota:
Maxay Tahay Sababta Dembiilayaashu Kaliya U Qoraan Faallooyinka?
Markii ugu horraysay ee PageRank laga wada hadlay isla markaana boggag internet ahi u dhaqaaqeen goobta, faallayntu aad bay caan u ahayd. Kaliya maahayn goobta dhexe ee lagu wadahadlo (kahor Facebook iyo Twitter), waxay kaloo dhaaftay darajo markii aad buuxisay faahfaahinta qoraaga oo aad ku dartay xiriiriye faallooyinkaaga. Faallooyinka faallooyinka ayaa dhashay (walina waa dhibaato maalmahan). Waqti badan ma qaadan kahor nidaamyada maaraynta maareynta iyo nidaamyada faallooyinka ee lagu aasaasay xiriiriyeyaasha Nofollow ee ku saabsan astaamaha qoraaga faallooyinka iyo faallooyinka.
Google runti wuxuu bilaabay inuu taageero astaamo kale tan, ugc. UGC waa soo gaabinta Macmiil-Abuurista Tusmada.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa isku-darka astaamaha. In WordPress, tusaale ahaan, faallooyinku waxay u egyihiin sidan:
Dibadda waa sifo kale oo aan u ogolaanno guurguurayaasha inay ogaadaan inuu xiriirku ku sii jeedo an external goobta.
Miyaad Dib-u-Xiriirinta Dib-u-Sameyn Doontaa Si Aad U Hesho Xiriiro Dheer Badan?
Tani runti waa dhibic weyn oo aniga ila jirta. E-mayllada spammy ee aan kor ku soo sheegay runtii waa kuwo xanaaq badan oo aanan u adkaysan karin. Waxaan ahay aamin adag oo aad u baahan tahay kasban xiriiriyeyaasha, ha weydiinin iyaga. Saaxiibkeyga wanaagsan Tom Brodbeck ayaa si sax ah u magacaabay tan barashada. Waxaan ku xiraa kumanaan boggag iyo maqaallo ah oo laga helo boggeyga… maxaa yeelay waxay kasbadeen xiriirka.
Taasi waxay tiri, dhib iguma qabo in ganacsigu ila soo gaaro oo aan weydiiyo inay qori karaan maqaal qiimo u leh dhagaystayaashayda. Iyo, maahan wax aan caadi ahayn inay jiraan dofollow xiriiri qodobkaas. Waan diiday qoraalo badan maxaa yeelay dadka gudbinaya waxay bixiyaan maqaal naxdin leh gadaal cadna ku dhex leh. Laakiin waxaan daabacaa inbadan oo dheeri ah oo ah maqaallo cajaa'ib leh iyo xiriirka uu qoraagu adeegsaday wuxuu qiimo ugu fadhiyaa akhristayaashayda.
Ma sameeyo wacyigalin… waxaana haystaa ku dhowaad 110,000 xiriiriyeyaal oo dib ugu laabanaaya Martech Zone. Waxaan u maleynayaa inay taasi markhaati u tahay tayada qodobbada aan u oggolaado boggan. Waqtigaaga ku bixi daabacaadda waxyaabo cajiib ah… iyo backlinks ayaa raaci doona.
Tags: dib u noqoshodib u xiridbacklinksxiriiriyeyaasha faallooyinkabixintadofollowxiriiriyeyaasha dofollowguddiga ganacsiga ee federaalkaftcraadinta google googleshuruudaha adeegga googlegoogle +kasbashada isku xidhkatayada linkisku xirka dhismahanofollowxiriirinta nofollowdarajaynta raadinta dabiiciga ahxiriiriyeyaasha la bixiyayxiriiriyeyaal tayo lehrelrel dofollowrel nofollowrel kafaala qaadayrel ugcgurguurto engine engineqiimeynta raadintaxiriiriyeyaal la kafaala qaadayuGCisku xidhka ugcwordpress dofollowwordpress nofollow
Jan 21, 2007 saacadu markay ahayd 1:35 PM
Waad ku mahadsantahay tilmaamida fiilada Dofollow Doug. Waan ka warqabey in WordPress ku darey rel = "nofollow" xiriiriyeyaasha faallooyinka, waana hubaa inaan ku raacsanahay caqligaaga illaa inta faallooyinka la dhexdhexaadinayo, wixii xiriir ah ee ku habboon ee ku haray faallooyinka waxay mudan yihiin in la siiyo mahadcelintooda.
Jan 22, 2007 saacadu markay ahayd 2:42 PM
Thanks for tip; Hadda waxaan rakibay fiilada (gebi ahaanba nidaamka aan xanuunka lahayn.)
Wareysiga faallooyinka spammer wuxuu yiri:
“Hindisaha ay wadaan Google, Yahoo iyo MSN, ee lagu sharfayo“ ha raacin ”xiriiriyeyaasha ma ka adkaan doontaa Sam iyo kuwa la midka ah? Uma maleynayo inay saameyn badan ku yeelan doonto mustaqbalka dhow, dhexdhexaadka ama muddada dheer.
Wareysiga oo dhameystiran waa kan:
Jan 22, 2007 saacadu markay ahayd 5:56 PM
Martin, maqaal weyn. Waxaan la yaabanahay sida ay u adkaatay shaqadiisu sanadkii ugu dambeeyay!
Feb 24, 2007 markay ahayd 6:22 PM
Ma jirtaa waddo lagu doorto xiriiriyaha aan doonayo in la ii raaco (wow, luuqad xiiso leh oo aan dhisay). Sababta ayaa ah markaan tixraaco qaar ka mid ah bogga xasaasiga ah oo ay ku jiraan macluumaad xasaasi ah oo ku yaal, waan ka doorbidayaa inaanan kor u qaadin wax badan. Ma ahan faaf-reeb ahaan (haddii aan tixraaco, dhaho, ra’yi siyaasadeed oo aad uga geddisan tayda, laakiin haddii si wanaagsan loo aasaasay oo si wanaagsan loo dhigay, dhib kuma qabo in aan u ololeeyo), laakiin waa sidii loola dagaallami lahaa bakhaylnimada oo aan hoos u qodi waxyaabo macaan
Wax dhibaato ah kuma qabo inaan gacanta ku saxo xiriiriyeyaasha. Had iyo jeer waan saxaa faallooyinka si aan ugu daro xiriiriyeyaasha Google Analytics ee baxaya, cinwaanada xiriirinta iyo hagaajinta qaab-soo-booqdayaasha, laakiin way fiicnaan laheyd in otomaatiga laga dhigo illaa heer.
Feb 24, 2007 markay ahayd 6:52 PM
Hubaal, theUg! Waad ku dari kartaa rel = ”nofollow” gudahood xiriiriye kasta oo aadan rabin Google inuu qiimeeyo. Tusaale:
Feb 24, 2007 markay ahayd 7:22 PM
Haa, taasi way ka sahlan tahay isku dayga inaad tirtirto. Waxaan ku hayaa dhammaan walxaha sida badan loo isticmaalo sida kuwa ku jira Qoraaladayda Opera (aad ayey u anfacaysaa in la helo qaybo, gaballo, iyo gabal gabal koodh ah isla mar ahaantaana ku dhex jira biraawsarkaaga), markaa runti waa uun nuqul-dhaji.
Febraayo 28, 2007 saacadu markay tahay 12: 55 AM
Waan helay tan. Waxay ahayd inuu hubiyo kahor inta uusan kulaxariirin foomka xiriirka.
Waan ku raacsanahay Doug. Haddii aad ku socoto dhibaatada akhrinta iyo dhexdhexaadinta faallooyin kasta si kasta (oo ay tahay inaad noqotid) markaa macno ayey leedahay in lagu abaalmariyo faallooyinka dhabta ah ee leh isku xirnaan habboon.
Waxaad ka heli doontaa faallooyin badan oo "Weyn post" ah natiijada, laakiin kuwaa si toos ah ayey u galaan qashinka qashinka.
Khayaanada cad waxay leeyihiin magacyo sida "SEO expert" ama "Web design Atlanta" ama wax keyword la rakibo. Kuwa runta ahi badanaa waxay leeyihiin magacyo dhab ah sida "Lisa" ama "Robert".
Ku qabow inaad mowqif ka istaagtay arrinta la raacayo. Faallooyin ku saabsan natiijada? Ma heshay natiijooyinkii aad ugu talo gashay?
Natiijooyinku muhiim iguma aha aniga siday ii noqon doonaan sida dadkiinoo kale! Ka faallaynta boggeygu waa inay kaa caawiyaan qiimeyntaada Google.
Apr 27, 2007 at 4: 29 PM
Waxaan socodsiiyaa degel Drupal ku shaqeeya, markaa way rakibtaa iyada oo aan rel = nofollow, oo waa inaad rakibataa qalab lagu daro tan. Aniga in kasta oo aan sidan samaynayay in muddo ah, laakiin waxaan xaqiiqsaday in sababta kaliya ee sidaa loo yeelo ay tahay dareen xasaasi ah oo ah in faallooyinka aan kaga tagayo bogagga dadka kale aysan i siinayn darajo bog, halka aan iyaga u siinayo darajada bogga. Waxaan go’aansaday inaan uga tago sidii ay tahay.
Dadka badankood waxay dhexdhexaad ka noqdaan faallooyinkooda marka maxaa ciqaaba kuwa waqtiga qaata inay kaga baxaan faallo wax ku ool ah goobta?
Waxaan kudaray siyaasad faallooyin boggeyga si aanan wax xun ugaga dareemin tirtirka faallooyinka kujira aagga cawl.
Tusaale ahaan, haddii qof uu ka tago faallo oraneysa “bog wanaagsan”, waxaan soo jeedinayaa in aan tirtiro faallada, illaa ay ka tagayaan goobta URL oo bannaan. Iyadoo aan lahayn siyaasad noocan oo kale ah, waxaan dareemay inaan ku qasbay inaan hubiyo iskuxirka oo aan go'aan ku gaaro goobta.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waan xiiseynayaa.
dadka qaarkiis waxay dhahaan in bogaggu wali kuxisaami doonaan astaamaha 'no follow tag'. tani run ma tahay?
Haa, mahan dhammaan matoorada raadinta inay ixtiraamaan maya-raac. Waxay unaba dhacdaa in Google, oo ah wiilka weyn ee daarta, in kastoo uu sameeyo. Ma hubo Live, Weyddiis ama Yahoo! Qaadi kara xoogaa qodis ah si loo ogaado.
Jun 20, 2007 at 5: 10 PM
Shaqo wanaagsan - Aad baan uga soo horjeedaa nofollow.
Xidhiidh kasta waa in la tiriyaa, ama waa inaadan u oggolaan inuu xiriirku jiro. Waan ogahay dadka si ula kac ah ugu darsada nofollow xiriiriyeyaasha ku jira qoraalladooda si aysan u heli doonin hal tan oo xiriirro dibedda ah, iyadoo fikradda ah in bogagga isku xira in ka badan inta ay ku xiran yihiin ay helaan PR hoose.
Way iga xanaajisaa dhammaad.
Jun 23, 2007 at 2: 04 PM
Waxaan si isku mid ah ugu qabanay boggayaga 'blog news news' oo aan waxba ka jirin laakiin natiijooyin wax ku ool ah oo ku saabsan tabarucaadka isticmaalaha iyo casiirka mashiinka raadinta. 🙂
Jul 16, 2007 markay ahayd 7:34 AM
IMO rel = ”nofollow” gabi ahaanba waa mid aan waxtar lahayn, ma joojin doono faallooyinka faallooyinka maxaa yeelay spamers-ku waxay adeegsadaan softiweer. Xalka ugu fiican ee looga hortagi karo kuwa wax faallooyinka ku faalloodaa waa noocyo sida Akismet, Dabeecad Xun iyo qabasho ama su'aalo aadanaha.
Jul 22, 2007 markay ahayd 3:01 AM
haa? kuwa wiki doqonka ah!
la yaabban waxa dhacaya haddii aan dhammaanteen u adeegsanno daba-gal iyaga ah?
Mid fiican hayso.
Jul 29, 2007 markay ahayd 3:30 AM
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo haddii WordPress, Yahoo 360, Blogger, iwm ay u isticmaalaan “nofollow” qoraalada blog-ka. yacni haddaan qoro qoraal boggeyga oo aan ku xiro xiriiriye, xiriiriyaha kujira qoraalkaygu miyuu isu beddelaa rel = nofollow?
Agoosto 6, 2007 saacaddu markay ahayd 10:50 PM
Aad baad ugu mahadsantahay maqaalka wanaagsan ee ku saabsan astaamaha aan la raacin. Sababtoo ah waxaa loogu rakibay sida caadiga ah WordPress, waxaan ka shakisanahay in dad aad u xun xitaa aysan ogeyn inay jirto.
Waxaan u maleynayaa in siyaasad ama ogolaansho ama diidmo faallooyinka shaqsi ahaan halkii aan kaliya hoos u dhigi lahaa dhammaantood ay tahay hab aad uga wanaagsan.
Agoosto 15, 2007 saacaddu markay ahayd 3:00 PM
Waad ku mahadsan tahay qoraalkan! Waan ogahay inaan in yar ka daahay raadinta, laakiin waxaan bilaabay boggaga oo waxaan isku dayayaa inaan ogaado sababta ay ereyada qoraalka ahi u dhigayaan nofollow xiriidhadayda. Waxaan dhigi doonaa dofollow mahadsanid helitaanka bartaada, laga yaabee taasi waxay dhiiri gelin doontaa faallooyin badan iyo isdhexgal boggeyga cusub.
Aug 16, 2007 at 10: 22 AM
Ma hubo inta ay dhab ahaan si toos ah uga caawiso ka-qaybgalka. Waxaan u maleynayaa, si kastaba ha noqotee, 'shimbiraha baalasha inay wada duulaan' markaa waxaad u badan tahay inaad isku xirto oo aad kaqeybqaadato baloogyada kale ee aan isticmaalin nofollow. Mustaqbalka fog, waxaan u maleynayaa inay jirto waxtar.
Waan jeclahay maxaa yeelay waxaan aaminsanahay in inta badan ee aan ku guuleysto balooggu ay ku dhacday kaqeybgalka dadka sidaada oo kale wadahadalka ah. Maxaan u helayaa faa'iidooyinka oo dhan?!
Agoosto 26, 2007 saacaddu markay ahayd 6:58 PM
Waad ku mahadsantahay macluumaadkan Doug, waxaan gacanta ku dari jiray calaamadaha rel ee xiriiriyahayga laakiin waligey xitaa ma tixgelin habkan faallooyinka. Macno ayey leedahay inkasta, waxaan u maleynayaa inaan bilaabi doono tan tan iyo markii aan horeyba dhexdhexaad uga dhigay faallooyinkeyga si heer sare ah.
Sep 10, 2007 at 8: 48 AM
Haye, waxaan rakibey qalabka 'DoFollow' maalmo yar ka hor, waxaanna xoogaa mahadnaq ah ka helay qaar ka mid ah baloogyada yaryar ee aan ku xidho maqaaladayda iyo faallooyinkayga.
Dadaal weyn sidoo kale, laakiin KELIYA oo lagu daro faallo adag / maareynta isticmaale, haddii kale baloogyada ayaa noqon doona ilo spam ka dhakhso badan inta aan fileyno.
13, 2007 at 8: 31 PM
doug, sheygan nofollow runti wuu xanuun badnaa labada baloog iyo faallooyinka sharciga ah… waxaan kaliya rajaynayaa in qof abuuro shey kaas oo awood u siinaya / joojin kara nofollow rabitaanka maamulka. dhammaan waxyaabaha loo yaqaan 'nofollo plugins' ee aan isticmaalay ayaa ka siibay sumadda nofollow ee dhammaan faallooyinka iyo / ama faallooyinka. sidaad tidhi, dadka qaarkiis waxay doortaan inay oggolaadaan faallooyinka isticmaaleyaashooda
14, 2007 at 3: 15 AM
Waan ku raacsanahay, Jessie! WordPress waxay heshay jawaab celintaas cod dheer iyo mid cad, laakiin waxaan u maleynayaa inay cadaadis kaga imaan karaan Mashiinnada Raadinta si aan ikhtiyaar looga dhigin.
14, 2007 at 5: 52 AM
waxa qosolka badan ee doug ayaa ah in kuwa "u dooda" nofollow badankood leeyihiin bogaggag internet / blogs blog. miyaanay ahayn wax lagu qoslo in dadku wax sheegaan oo mid kale sameeyaan? Waxaan ku helay jaceylkeyga inaan halkan ku yeesho dofollow sida bloggeyga… ma hubo oo kaliya sida tani u saameyn doonto PR-kayga google.
Febraayo 3, 2008 saacadu markay tahay 3: 42 AM
Waad ku mahadsan tahay sharaxaadda tan. Waxaan hadda helayaa degel websaydh ah oo aan bilaabay, oo waxaan eegay dhammaan xulashooyinka baloogyada. Nasiib darro software-ka blog-ka ee qasacadaysan ee aan ku isticmaali karo boggeygu wuxuu urayaa baraf, waxaanan ka fikirayey isticmaalka wordpress, marka waad ku mahadsan tahay ka hadlidda waxyaabaha soo socda ama maya qodobka soo socda. Waxaan hayaa 2 websaydh, mid aan lahayn google gadaal xiriiriyeyaashiisa, maalin dhaweydna goobtaydii labaad waxay soo bandhigtay 10 google backlinks oo buluugga ka mid ah, runtiina waan faraxsanahay! Waxaan ku dhajiyaa baloogyada markasta oo xitaa ma ogeyn inaad xiriir ka heli karto habkaas, (duh, newbie!) Oo si lama filaan ah waxaan 10 xiriiriye uga helay Dawud Miracle - yaa ku jira caynkee ah ???? Waxaan raacay xiriiriyaha dib ugu noqoshada boggiisa waxaanan gartay inuu ka mid yahay baloogyo badan oo badan oo aan soo dhigay, mahadsanid Miracle, waxay ahayd mucjiso !!! Markaas ayaan la yaabay sida ay u dhacday, iyo sababta aysan horay u dhicin! Marka hadda waan helay. Markii aan kor u qaado softiweerka qoraalkayga waxaan si rasmi ah u helayaa raaca, ee ma ahan nooca la raaco. Guul baa inagu filan dhamaanteen… ..